Maitiro ekurodha mepu kubva kuGoogle Mepu kuti ufambe pasina nharembozha | IPhone nhau
Maitiro ekudhawunirodha mepu kubva kuGoogle Mepu kuti ufambe pasina mobile data
Kunyange chiri chokwadi kuti Apple Mepu yakavandudza zvakanyanya mumakore achangopfuura, kusvika tora pakukwirira kwakafanana neGoogle Mepu, Apple mepu sevhisi inoenderera iine zvimwe zvikanganiso izvo zvinomanikidza vamwe vashandisi kuenderera vachishandisa Google mepu sevhisi.
Kana iyi iri nyaya yako, zvingangoita kuti iwe uzive sarudzo iyo Google inotipa kana zvasvika dhawunorodha mepu kuti ufambe pasina kukosha kwekubatana kwedata, sarudzo yakanaka kana tikaronga kuita rwendo rurefu uye isu hatidi kusiya hafu yedata renhamba yedu parwendo rwedu.
Uye zvakare, zvinotibvumidza isu famba munzvimbo dzinowanikwa kushoma kana iri isipo, saka inokodzera nzira dzekunze dzinoshandisa kubatana kweGPS yezvishandiso zvedu.
Maitiro ekukopa mamepu kubva kuGoogle Mepu
Kana tangovhura iko kunyorera, tinya pane yedu avatar iri mu kumusoro kurudyi kona yekushandisa uye tinya Mamepu kunze kwenyika.
Tevere, tinofanira sarudza nzvimbo yatinoda kurodha pasi kuburikidza nesarudzo Sarudza mepu yako wega.
Sezvo isu tichiwedzera kana kudzikisa nzvimbo yemepu yatinoda kurodha pasi, pazasi pebhokisi rekusarudza saizi yekurodha pasi inozoratidzwa. Kana tangosarudza nzvimbo yatinoda kurodha pasi, tinya download.
Panguva iyoyo iko kunyorera ichatanga kurodha munzvimbo yakatemwa.
Kana tikadzora mepu dzinoverengeka, tinya penzura iri mukona yepamusoro yekona, tinogona gadza zita kuita kuti zvive nyore kuwana.
Mamepu atinotora anoshanda kwegore rimwe chete, mushure maizvozvo inozobviswa otomatiki kunze kwekunge tiri kuigadziridza nguva nenguva nekudzvanya pamatanho matatu akatwasuka ari kurudyi kwezita remepu, uye kusarudza Gadziridza.
Google inoshandisa iyo yakachengetwa data yemamepu chero bedzi tisina data rekuvhara uye kana tinobvisa nharembozha apo isu tichishandisa application.
Apple Mepu haitibvumire kurodha mepuZvichida zvenguva, mamapu ekushandisa pasina kubatana kwedata, saka yakanakisa uye yemahara sarudzo yatinayo yekushandisa mepu pasina internet yekubatanidza ndiyo iyo iyo Google Mepu isingapi ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekudhawunirodha mepu kubva kuGoogle Mepu kuti ufambe pasina mobile data
Iyo itsva iPad ye2021 yeiyo Q1 uye ine mini-LED skrini
End 2020 uchiteerera nziyo dzinozivikanwa kwazvo dzenyika yega yega paApple Music